Aza manompo sarin-javatra voasokitra
"Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy" Eks. 20:4,5
Fanoloran-tena tanteraka sy fahatokiana ambony indrindra no takin'ny Mpahary antsika amintsika. Na inona na inona zavatra mitady hampihena ny fitiavantsika an'Andriamanitra na manohintohina ny fanompoana tokony hataontsika Aminy, dia tonga sampintsika izany. Tanterahina amin-kafanam-po sy amim-pahavitrihana ny raharahan'ny tany, fa atao ambin-javatra kosa ny fanompoana an'Andriamanitra. Atao tsirambina ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy, ary hadino ny fanaovana vavaka mangina. Maro ireo milaza fa manao ny marina amin'ny mpiara-belona aminy, ary mihevitra fa mahefa ny adidiny rehetra izy noho ny fanaovany izany. Kanefa tsy ampy ny fitandremana ny didy enina farany fotsiny ao amin'ny didy folo. Antsoina isika mba hitia an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Ny fankatoavana ny didy rehetra ihany (...) no mahafeno ny fepetra takin'ny lalàn'Andriamanitra.
Maro ireo izay mafy fo loatra noho ny fananan-karena ka hadinony Andriamanitra ary hadinony ny zavatra ilain'ireo mpiara-belona aminy. Miravaka vatosoa, rojo, firavaka lafo vidy ireo milaza ny tenany ho Kristianina, kanefa ireo mahantran'ny Tompo tsy manana izay ilainy hoentiny miaina. Lehilahy sy vehivavy maro no milaza ny tenany ho voavonjy noho ny ran'ny Mpamonjy kanefa mandanilany ny hoenti-manana nankinina taminy mba hamonjena ireo fanahy hafa. Mahihitra izy ireo raha hanao fanatitra ho an'ny asan'ny fiangonana. Ary tsy manome betsaka izy raha tsy rehefa ahazoany voninahitra ho an'ny tenany izany. Mpanompo sampy ny olona toy izany. — ST, 26 Janoary 1882
Maka ny endriky ny sampy ny zavatra rehetra izay mampivily ny saina hiala amin'Andriamanitra. Izany no antony mahakely dia kely ny herin'ny fiangonana ankehitriny. — Ms, 2, 1893
Mandrara antsika tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanehoana Azy amin'ny endrika aman-tsary ny didy faharoa (...) Voasintona ho any amin'ny voary fa tsy ho any amin'ny Mpahary ny sain'ny olona amin'ireny sarin-javatra ireny, ka voavily hiala amin' ilay Jehôvah tsy manam-petra manana fahatanterahana. — PP, 306.
Mpandinika ny fon'ny olona Andriamanitra. Manavaka ny fanompoana avy ao am-po marina sy ny fanompoan-tsampy Izy. - Ms, 126, 1901.